Nyefee Videos si iPad ikuku na kọmputa na ala
> Resource> iPad> Nyefee Videos si iPad ikuku na kọmputa na ala
Nwere ọtụtụ videos gị ohuru iPad ikuku, ma ugbu a ị chọrọ mbupụ ha ka ha onwe elu na ohere nchekwa ma ọ bụ na-ekiri ha na kọmputa? N'ụzọ dị mwute, iTunes arụ ọrụ nke ọma na syncing videos ka iPad ikuku, ma ọ bụ na-enweghị enyemaka nyefee vidiyo si na iPad ikuku na kọmputa, ma e wezụga zụrụ n'anya. Ọ pụtara na i mkpa ịchọta ihe ọzọ na-enyere, mgbe videos na gị iPad ikuku na-jidere si isi mmalite ndị ọzọ.
Ịrụ ndị iPad ikuku video transfer na a nchebe na ngwa ngwa otú ahụ, m ukwuu nwere ike ikwu iPad transfer ngwá ọrụ - na Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ pụrụ inyere gị effortlessly nyefee niile videos, sịnụ, fim, iTunes U, pọdkastị, TV na-egosi, music videos na video gbara na iPad ikuku na kọmputa na-iTunes.
N'okpuru ebe a bụ ihe zuru ezu nduzi banyere video transfer na Windows version. Mac ọrụ nwere ike-agbaso nduzi kwa. Ugbu a, ibudata Windows ma ọ bụ Mac Version na kọmputa. Mgbe ahụ, ike iṅomi nduzi.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na jikọọ na gị iPad ikuku
Jikọọ gị iPad Air na kọmputa site na eriri USB. Ngwa ngwa wụnye na-agba ọsọ ahụ software na kọmputa. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ gị iPad Air Ama-egosi na ahụ software akpan window.
Cheta na: E wezụga iPad ikuku, a software na-akwado ndị ọzọ ụdị nke iPad. Ha na-iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad 2, iPad na Retina ngosi, The New iPad na iPad.
Nzọụkwụ 2. Nyefee iPad videos na kọmputa
Dị ka ọ bụ ka e gosiri na hapụrụ kọlụm nke bụ isi window, faịlụ niile na gị iPad Air na-categorized n'ime dị iche iche nchekwa, dị ka Media, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Photos, Ndi ana-akpo> na SMS. Dị nnọọ aga Media. Na window gosiri na nri, ị pụrụ ịhụ videos na-echekwara dị iche iche edemede.
Pịa otu udi, dị ka Movies. Na nkiri window, nne Mmetụta fim na ị ga-amasị mbupụ. Mgbe ahụ, pịa Export ka nyefee fim iPad ikuku na kọmputa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwaga nkiri na iTunes, ị nwere ike ma pịa Smart Mbupụ na iTunes ma ọ bụ pịa obere triangle n'okpuru Mbupụ na ma họrọ Mbupụ na iTunes Library si esiri-ala ndepụta.
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike nyefee fim, pọdkastị, music videos, iTunes U na TV na-egosi site na iPad ikuku na kọmputa na ala.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? The software n'ezie ezigbo ọrụ ná edegharị vidiyo si na iPad ikuku ka Windows PC na Mac. E wezụga videos, na ị na-eru nke exporting music, photos, kọntaktị na gị iPad na kọmputa kwa.
Olee otú Hichapụ Photos site na iPad
Otú nyefee Photos si iPhone ka PC